International Cricket - Part 209
आईसीसी विश्वप २०१९ मा भारतीय टिम सेफिाइनलबाट बाहिरिए पछि प्रशिक्षक रवि शास्त्रीको कार्यकाल थप नगर्ने भन्दै टिमका लागि नयाँ प्रशिक्षकको खोजि शुरु भइसकेको छ । त्यसका लागि कपिल देवको नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको छ । भारतीय प्रशिक्षक बन्नका…
भारतको वेष्ट इन्डिज टुर: तीनै फर्म्याटमा विराट कप्तान, हार्दिकलाई रेस्ट बुमराह टेष्टमा मात्र
नेप्लेज, ५ साउन । सबै अनुमानहरुलाई गलत सावित गर्दै वेष्ट इण्डिजबिरुद्धको शृंखलाका लागि भारतले सबै फम्र्याटको क्रिकेटमा विराट कोहलीलाई नै कप्तानमा निरन्तरता दिएको छ । आइतबार मुम्बईमा ट्वान्टी२०, एकदिवशीय र टेष्ट टिमको घोषणा कार्यक्रममा…
सिंगापुरमा हुने आइसीसी टी २० विश्वकपको एशिया क्षेत्रीय छनोटको फाइनल भोली (सोमबार) बाट मलेसिया सुरु हुँदैछ । जसका लागि नेपाली क्रिकेट टिमले सिंगापुर पुगेर अन्तिम तयारीपनि पुरा गरेको छ । कुवेत, मलेसिया, कतार, नेपाल र घरेलु टिम सिंगापुर रहेको…
बंगलादेश क्रिकेट टिममा कप्तान परिवर्तन
बंगलादेशले श्रीलंका सिरिज अगाडि टिमको कप्तान परिवर्तन गरेको छ । विश्वकपमा कप्तानी गरेका मशरफे मोर्तजाकै कप्तानीमा यसअघि श्रीलंकाविरुद्धको सिरिजका लागि टिम घोषणा गरिएको थियो । तर मोर्तजा घाइते भएपछि तमीम इकबाललाई कप्तान बनाइएको हो ।…
फुटबलको नियम अब क्रिकेटमा पनि लागू!
आईसीसीको हालै सम्पन्न बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । लण्डनमा सम्पन्न भएको बैठकले क्रिकेटमा पनि फुटबलको जस्तै नियम लागू गर्ने भएको छ । त्यो भनेको खेलाडी परिवर्तन । यसअघि प्लेयिङ सेट सार्वजनिक भइसके पछि कुनै पनि खेलाडी परिवर्तन गर्न…
भारतमा विश्वकप हुँदा यी ५ स्टेडियमले पाउलान त मौका ?
आईसीसी विश्वकप २०१९ सकिएको छ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा भएको प्रतियोगिताको उपाधि फाइनलमा न्यूजिल्याण्डलाई पराजित गर्दै घरेलु टोली इंग्ल्याण्डले जित्न सफल भयो । अब १३ औं संस्करणको विश्वकप क्रिकेट भारतमा हुने छ । त्यसका लागि आईसीसीले भारतलाई…
श्रीलंकाका प्रशिक्षक हथरुसिंघेलाई बर्खास्त गर्न खेलमन्त्रीको आदेश
कोलम्बो, ४ साउन । श्रीलंकाली टिमका प्रशिक्षक चण्डिका हथरुसिंघेलाई वर्खास्त गर्न त्यहाँका खेलकुद मन्त्री हारिन फर्नान्डोले आदेश दिएका छन् । यो काम उनले विश्वकप अघि नै गर्न चाहे पनि त्यतिबेला गर्न सकेका थिएनन् । तर आईसीसी विश्वकप क्रिकेटमा…
महेन्द्रसिंह धोनीले क्रिकेटबाट लिए २ महिनालाई छुट्टी!
काठमाडौं, ४ साउन । भारतीय क्रिकेट टिमका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान महेन्द्रसिंह धोनी अबको २ महिना क्रिकेटबाट टाढा हुने भएका छन् । विश्वकप क्रिकेटबाट भारतीय टिम सेमिफाइनलमै आउट हुँदा धोनीको प्रर्दशनलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । त्यसपछि…
Previous 1 … 207 208 209 210 211 … 363 Next